Conga 3090 famerenana banga madio | Vaovao momba ny gadget
Famerenana fanadiovana vaksina Conga 3090
Rafa Rodríguez Ballesteros | | an-trano, hevitra
Androany ao Blusens dia manadio izahay. Nanam-bintana izahay fa nisedra tao an-trano nandritra ny andro vitsivitsy ny iray amin'ireo mpanadio fantsona manana fahaleovan-tena tena mahay eny an-tsena. Ny Conga 3090 vacuum cleaner amin'ny fanamboarana Espaniola dia namela ny saina ho avo be. Nandritra ny andro fitsapana natolony fampisehoana sy valiny tena tsara.
Amin'ny fotoana mampirongatra ity karazana fitaovana kely ity. Conga dia manana anjara betsaka amin'ny sehatra. Ary manao izany amin'ny alàlan'ny fanolorana vokatra afaka mifaninana amin'ny tongotra mitovy amin'ny orinasa hafa izay manadio mpanadio banga mitovy amin'ny vidiny avo roa heny. Tsy misy isalasalana fa safidy tsara ny Conga 3090. Ary mandinika bebe kokoa an'izany izao afaka mividy amin'ny fihenam-bidy 47% ianao Conga 3090 mahafinaritra.
1 Conga 3090 famolavolana mahazatra fa gaga
2 Ny teknolojia laser izay mampisy fahasamihafana
3 Ny Conga 3090, betsaka kokoa noho ny kely kokoa
4 Inona no atolotry ity mpanadio banga ity?
5 Fahaleovan-tena mendrika izay tsy latsaka ambany
6 Fampiharana namboarina ho fampiasana mora kokoa aza
7 Datasheet manadio vaksina Conga 3090
Conga 3090 famolavolana mahazatra fa gaga
Raha mijery ny lafiny ara-batana an'ny mpanadio banga isika dia hitantsika ny fomba ny fisehony dia mahazatra antsika. Saika ny mpamadika banga rehetra amin'ity karazana ity dia mitovy amin'ny tsirairay. Ny Conga 3090, avy amin'ny orinasa Espaniola Cecotec, dia manana ihany koa endrika boribory ary manana haavo amin'ny zavatra latsaky ny folo santimetatra.
Eo an-tampony, mifanohitra amin'izay mitranga amin'ireo fitaovana mitovy aminy, mahita isika a ambonin-malama sy madio. Misongadina amin'ny faritra afovoany fivontosana kely misy laser vaovao iza no hanao "sarintany" an-tranontsika hialana amin'ny fanaka sy ny sakana hafa rehefa manadio. Tsy misy fisalasalana iray amin'ireo zava-baovao tokony hasongadina izay horesahintsika manaraka.
Ao amin'ny ambany Conga 3090 vacuum cleaner dia mahita singa maro isika. Amin'ny tapany afovoany, ny tena zava-dehibe dia hita, ny borosy banga. Tokana izy io borosy roa izay manelanelana ireo tsipika volom-borona roa amin'ny tsipika silipo roa hafa. Ny fampifangaroana ireo fitaovana roa ireo dia mahatonga ny fanangonana fako tena mahomby.
Amin'ny sisiny amin'ity borosy afovoany hitantsika ity kodiarana roa lehibe. Miaraka amin'izy ireo ilay mpanadio banga mivezivezy manodidina ny trano amin'ny hafanam-po. Ary manana rafi-pitabatabana izy ireo izay mampisondrotra ny haavon'ny Conga 3090 rehefa mahita ny endrika matevina toy ny karipetra.
Eo alohan'ilay borosy afovoany dia ahitantsika ny teboka izay tsy maintsy ampidirintsika borosy kely. Ity borosy kely ity dia hanampy amin'ny fanangonana mora ny fako mavesatra indrindra amin'ny fanampiana azy hampiditra azy ao amin'ilay mpanadio banga. Mihodina mihintsy ilay masinina hampiasa io borosy io rehefa mahita ny fanangonam-bovoka na singa hafa.
Resy lahatra ve ianao? Vidio tsindrio eto la Conga mahafinaritra 3090.
Any amin'ny farany ambony no ahitantsika familiana, kely kokoa noho ny kodiarana. Ary eo amin'ny sisiny, mpampitohy vy izay iampangana ny bateria an'ny Conga 3090. Eo amin'ny toerana anaovan'ny mpanadio «valan-javaboary» ao anaty fotony famahana azy rehefa vita ny fanadiovana na rehefa mila mamerina ny bateria izy.
Ary farany, ao aoriana ny faritra izay hametrahanay dobo ahafahantsika mampiasa an'io fitaovana io, ankoatry ny fandroahana rano, ho an'ny fametahana na fanosehana tany.
Manamboatra ny tanky milamina amin'ny "kitika" ary esorina amin'ny fomba mitovy. Tsy maintsy esorintsika ilay satroka mba hanampy rano sy vokatra fanadiovana.
Ny teknolojia laser izay mampisy fahasamihafana
Araka ny efa nolazainay, maro ireo orinasa no natomboka hamorona mpanadio banga mahaleo tena. Hatreto dia mitovy ihany ny toetra ara-batana. Nefa Mikasika ny haitao misy ny fitaovana tsirairay dia eto no ahitantsika ny fahasamihafana lehibe indrindra.
Tsena iray izay nahitana ny i-robot amerikana avaratra amerikana avaratra miaraka amin'ireo maodeliny Roomba no manana ny toerana ambony indrindra. Fa ahoana aorian'ny fitsapana natao miaraka amin'ity Conga ity, ary nahita ny valiny izay atolotray dia takatsika izany ny orinasan'ny Cecotec dia betsaka ny zavatra holazaina ato amin'ity tsena ity.
Iray amin'ireo zava-baovao lehibe manandanja indrindra mahatonga ny Conga 3090 vacuum cleaner hisongadina amin'ny fifaninanana dia ny laser miaraka aminy. Laser emitter miaraka amin'ny haitao artifisialy sy teknolojia infrared. Izay miaraka amina rindrambaiko ambony ny Conga 3090 dia manao an-tsarintany ny velaran'ny tranonay.
Ny Conga 3090, betsaka kokoa noho ny kely kokoa
Manoloana ny teknolojia natolotry ny mpifaninana aminy lehibe eny an-tsena, ny Roomba 980 miorina amin'ny fakan-tsary, ny famakiana amin'ny laser an'ny Conga 3090 dia azo itokisana kokoa sy mahomby kokoa. Ny fahasamihafana izay tsikaritra amin'ny fitondran'ilay mpanadio banga mandritra ny asany.
Aza mifanipy mihitsy amin'ny fanaka na seza, ary diovy ny zoro rehetra izay azonao idirana nefa tsy ho sosotra amin'ny fotoana rehetra. Ary izany dia satria mamantatra ny zavatra hita rehetra amin'ny alàlan'ny famakiana laser 360 degre marobe isa-minitra hahalala hoe aiza ny zava-drehetra.
Rehefa mamantatra a efitrano lehibe, mandeha ho azy zarao amin'ny mahitsizoro ny habaka hanao azy ireo milamina. Ka ny fanadiovana no mahomby kokoa. Raha tsy mandeha amin'ny antsipiriany momba izay hain'ny mpifaninana aminy eny an-tsena azontsika atao, dia hitantsika ny fomba latsaky ny antsasaky ny vidiny dia afaka mihoatra ny andrasana miaraka amin'ny data sy valiny. Ary izany rehetra izany dia 349 € fotsiny tsy ratsy!
Inona no atolotry ity mpanadio banga ity?
Fanontaniana tsara io rehefa manameloka ny tsena isika mba hahazoana vokatra. Raha izany dia, ny mpanadio banga ao Cecotec dia manana toerana miavaka noho ireo zava-baovao atolotra azy raha oharina amin'ny fifaninanana. Ary ho an'ny fahaizan-javatra dia asehony amin'ny fanatanterahana karazana fanadiovana samihafa.
Ao anaty boaty hitantsika, ankoatry ny mpanadio banga, singa maromaro. Ny tanky ho an'ny ranon-javatra sy vokatra fanadiovana ahafahantsika mampiasa ny fomba fikosehana sy ny maody mop. Manana ny fanoloana ny lamba ivelany azo nosasana isika. Hitantsika koa borosy roa, izay hita eo amin'ny ilany ankavia. Ary koa borosy hanadio ny masinina ao ambanin'ireo mety ho fametrahana loto. Ary, ho fanampin'ny torolalana fampianarana ary ny boky fiantohana, hitantsika ny fanaraha-maso lavitra izay misy batery koa.
Ny hetahetan'ny Conga 3090 dia mahatratra a Herin-tsofina Pascal 2000. Raha ampitahaina amin'ny 1670 natolotry ny Roomba 980. Izy io koa dia manana fomba fanekena karipetra izay tena ilaina. Rehefa mahatsikaritra fa lamba ny etany avo roa heny ny heriny ho an'ny fanadiovana mahery vaika kokoa.
Ho fanampin'ilay emitter laser voalaza etsy ambony, ny Conga 3090 koa dia manolotra zava-baovao hafa momba ireo mpifaninana aminy. Manana isika safidy ho an'ny fandefasana entana ary koa amin'ny maody fikosehana. Eny, ny Conga 3090 koa dia mamafa ny trano ho antsika. Ary azo atao izany noho ny tanky izay napetraka mora ahafahana manampy rano sy vokatra fanadiovana.
Safidy tsy azo lavina fa manadio io fantsona io, ankoatry ny fahatongavany robot manadio fa tsy vovoka ihany, manaova fanovana amin'ny hafa. Zavatra vao mainka nohamafisina raha mijery ny vidiny isika raha ampitahaina amin'ny maro hafa eny an-tsena.
Vidio izao raha tsindrio ity rohy ity ny mpanadio banga ao Conga 3090 miaraka amina fihenam-bidy ny magazay ofisialy
Fahaleovan-tena mendrika izay tsy latsaka ambany
Ny iray amin'ireo lafiny izay raisina ihany koa rehefa manapa-kevitra amin'ny maodely iray na hafa dia ny fahaleovan-tena ananany. Ny mpanadio banga ao Conga 3090 dia manana Bateria lithium 3.200 mAh. Ary Cecotec miantoka fa afaka manolotra fizakantena hatramin'ny 110 minitra. Zavatra iray mazava ho azy mety miovaova arakaraka ny karazana fanadiovana sy ny hamafiny voafantina.
Fa raha toa kely fotsiny aminao ny fahaleovan-tena natolotry ity mpanadio banga ity dia tsy tokony hatahotra ianao. Cecotec dia nanome ny mpanadio banga aminy teknolojia tena mahaliana. Miaraka aminy ny fahaizan'ny bateria dia tsy olana intsony. Rehefa tsikaritry ny mpanadio banga ao Conga 3090 fa manana bateria ambany izy dia miverina ho azy hatrany am-pototra famahana izy. Y rehefa manana fizakantena ampy hamitana ny fiverenana amin'ny fanadiovana. Saingy noho ny rindrambaiko ananany dia afaka mahatadidy ny toerana nijanonany izy. Ka mitohy ny fanadiovana avy amin'ilay toerana namelanao azy.
Ny zava-baovao ananan'ity mpanadio banga ity dia ny fisafidianana ny maody indroa. Araka izany hanao fanadiovana lalindalina kokoa amin'ny alàlan'ny fanamboarana hatramin'ny roa ny tranokala iray. Ankoatr'izay, koa afaka misafidy faritra voafetra isika izay tsy hidiran'ilay mpanadio banga. Na manao ny mifanohitra amin'izay, safidio ny faritra tiantsika diovina fotsiny.
Fampiharana namboarina ho fampiasana mora kokoa aza
Amin'ny mpanadio banga afaka tanterahintsika amin'ny finday avo lenta, dia tena izy tena zava-dehibe ny fananana rindranasa izay mifanaraka amin'ny par. Ary ny Cecotec dia nahalala ny famolavolana fampiharana izay mahatonga ny fampiasana ny Conga 3090 vacuum cleaner ho mora kokoa noho ny nandrasana. Na dia tsy maintsy fantatsika aza fa ity mpanadio banga ity manana fanaraha-maso lavitra koa izy io. Didy iray ahafahantsika manome ny baiko fototra indrindra ary miasa tsara ihany koa izany.
Saingy araka ny lazaintsika, ny fampiharana finday dia mahomby kokoa ary manome fahafaha-manao bebe kokoa fampiasana. Amin'ny menio tena tsotra dia afaka mifidy ny fomba fanadiovana. Anisan'ireny isika manana ny tsotra indrindra, ny maody "auto" izay iasan'ny masinina miaraka amina lamina tonga lafatra hatrany amin'ny lafiny iray izay tsy ilaozany zoro raha tsy minono. fa Azontsika atao ihany koa ny misafidy fanadiovana ny sisiny an'ny faritra voafantina, na fa ny hetaheta dia tanterahina miolakolaka avy any ivelany mankany.
Azontsika atao koa ny manondro toerana manokana nanjary maloto ho anao haka azy io ary hiverina any amin'ny toby fiampangana. Afaka mifidy raha tontosa ny faniriana endrika "eco" miaraka amin'ny fanjifana angovo ambany, "Normal", na "turbo".
Misy zavatra tena tianay dia izany afaka mahita isika, vantany vao vita ny asa ny toerana rehetra notadiavinao, fakana hevitra amin'ny "sarintany" an-tsipiriany amin'ireo efitrano niasany. manavaka noho ny fifandraisany, afaka isika jereo amin'ny fotoana tena izy ny faritra andalovanao. Zavatra tsy atolotry ny mpanadio banga hafa izay misy vidiny telo aza amin'ny Conga 3090.
Ary koa, amin'ny alàlan'ny App, afaka mijery tantara momba ny hetsika izahay. Azontsika atao koa ny manamarina hoe oviana no fotoana farany nanaovantsika an-tsokosoko. Na ny fotoana nanosorantsika ny efitrano tamin'ity herinandro ity. Ary manana isika fampitaovana tena mahaliana. Vitantsika izany programa, toy ny hoe fanairana, ny fotoana tadiavintsika ny fampandehanana ny fanadiovana ary manomboka.
Datasheet manadio vaksina Conga 3090
modely Conga 3090
Fomba fanadiovana 10
Herin-tsofina Paska 2.000
Haavo hery 3
fizakantena 110 minitra
Fotoana fiampangana eo anelanelan'ny 3 sy 4 ora
Fahafahana tanky 600 ml
Fahafahana tanky ranoka 180 ml
My Account iTech Laser 360º
Fanaraha-maso lavitra SI
Fampiharana manokana SI
Rohy mividy Cecotec Conga Series 3090
vidiny 349.00 €
Sanda tsy azo tohaina amin'ny vola
Fomba fikosehana sy ny maody mop
Sarintany amin'ny laser
Ny fahaleovan-tena somary ambany noho izay nambaran'ny mpanamboatra
Tabataba kokoa noho ny nandrasana fa ambany noho ny fifaninanana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » hevitra » Famerenana fanadiovana vaksina Conga 3090
Tonga any Espana i Black Shark 2, izy no mpanjaka vaovao amin'ny filalaovana finday
Ahoana no hividianana Kindle